Mmọnwụ wakporo ụlọụka Fada 'Ebube mụọnsọ' - BBC News Ìgbò
Nkenke aha onyonyo Ịgba mmọnwụ bụ emume omenala e jiri mara Ndigbo
Ndị mmọnwụ na-eme emume, 'Ụzọ Iyi' n'Uke dị n'ọkpuru ọchịchị Idemili Nọt n'Anambara steeti wakporo ọgbakọ ekpere ndị ụka Katolik ma mebie ihe karịrị ụgbọala iri atọ, merụọ ọtụtụ ndị mmadụ ahụ, ebe e chere n'otu onye ha mara mma nwuru n'ụbọchị Satọde.
Onyeisi nchụaja ọgbakọ ụlọụka ahụ bụ Fada Emmanuel Obimma, nke a ma ama dị ka 'Ebube Mmụọnsọ' na ndị ụkọchụkwụ ndị ọzọ, na ndị ụmụnwaanyị e chiri echichi bịara ebe ahụ gbalahụrụ ndị ntorobịa ahụ wakporo ndị gara ikpere Chineke n'ụka ncheabalị ha mere n'abali Fraide banye n'isi ụtụtụ Satode.
Onye nnyemaka ụkọchụkwụ bụ Francis Okoye gwara onye ntaakụkọ BBC n'ekwentị na ndị mmọnwụ wakporo ebe ọgbakọ ụka abalị ahụ n'ihe dịka elekere asatọ nke abalị merụọ ọtụtụ mmadụ ahụ ma mebie ihe karịrị ụgbọala iri atọ.
'Aguleri na Igboukwu abụghị mbido Ndigbo'
"Mgbe ihe mechazịrị, anyị gụkọrọ ụgbọala ha mebirị gụta ịrị atọ. Ha merụrụ ọtụtụ ndị mmadụ ahụ.
O nwere ọtụ onye ha sụrụ mma e bugara ụlọ ọgwụ. Anyị amabeghị ma ọdị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ."
"O were anya na ndị ntorobịa Uke mere ihe a kwadoro akwado imekpa ndị ụka ahụ n'ihi na, a na-eme 'Uzọ iyi', mmọnwụ na-agbadebe ma ọ kụọ elekere isii nke mgbede mana ndị mmọnwụ a wakpọrọ ebe a na-eme ụka abalị ka ọ kụchara elekere asatọ nke abalị.
"Ha bidoro na-eti ndị ji ụgbọala ebute ndị mmadụ bịara ụka ihe, na-anara ha ego ha nakwa ekwentị ha.
Image copyright Francis Okoye
Nkenke aha onyonyo Mmọnwụ mebiri ọtụtụ ụgbọla n'ọgbakọ ahụ
"Ndị ọrụ nche anyị nwara ike ha ịkwụsị ha imebi ihe mana mgbe anyị hụrụ na ihe na-eme akarịala, anyị kpọrọ ndị uweojii oku. Ha bịara nwụchie ụfọdụ n'ime ha."
Ndị uweojii Anambra steeti kwuru n'ezie na mmọnwụ wakporo ndịụka n'Uke mana ha kwuru na onweghị onye nwụrụ.
Ọnụ na-ekwucitere ndị uweojii na steeti ahụ bụ Nkirụ Nwode gwara BBC na "Anyi nwụchịrị mmọnwụ atọ, anyị na-enyocha ihe mere ebe ahụ."
Akụkọ kwuru na nke a abụghị mbụ ndị ntorobịa obodo ahụ na-emekpa ndị na-aga ọgbakọ a pụrụiche ndị ụka Katolik na-eme kwa abalị Fraide nke na-adọta ihe karịrị pụkụ iri abụọ kwa izuụka.
Ndị nọ ebe ihe meere kwuru na ndị ntorobịa obodo ahụ na-esogbu ndị ọkwọụgbọala na ndịụka na-anapụ ha ego ma na-etikwa ụfọdụ ihe.
Na nsonso, ha tiri onye ọrụ Fada Obimma ihe nke mere ụkọchụkwụ ahụ ji kpesara ndịuweojii ndị nwụchịrị ndị ntorobịa ahụ ma ahapụrụ ha oge eze obodo na ndị okenye obodo gboro ọgụ.
Nkenke aha onyonyo E boro ebubọ na ndị ntorobịa na- emekpa ndị ọkwọụgbala na-akwọga ndị mmadụ ụka ahụ kwa mgbe
Kedụ otu pati ndị ga-ekpoko iwepụ APC?
Vidio Asụsụ Igbo agaghị anwụ
21 Eprel 2018
Vidio Soshal midia emeela m ọgaranya - Josh2funny, onye ọchị